SmartGaGa Nke a emulator gam akporo adịghị mma? | Androidsis
Ignacio Sala | 17/09/2021 18:00 | Egwuregwu gam akporo, Nyocha
A bịa na emulators gam akporo, anyị ga -ekwurịrị maka ya Bluestacks, otu n'ime ama ama. Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị naanị emulator dị na ọ bụghịkwa nhọrọ kacha mma maka kọmputa nwere obere ego. Ọ bụrụ na ị na -achọ onye nlele gam akporo maka ngwaọrụ nwere obere ego, ị na -achọ SmartGaGa.
SmartGaga bụ onye nomi emebere maka obere akụrụngwa IT na nke ahụ na -enye anyị ohere igwu egwuregwu ọ bụla dị na Storelọ Ahịa Play, ọ bụrụ PUBG, FreeFire, Oku ọrụ ... Emulator a na -arụ ọrụ site na Windows 7 gaa n'ihu na -achọ opekata mpe 2 GB nke Ram.
1 Kedu ihe bụ SmartGaGa
2 SmartGaGa ọ dị nchebe? Ee na mba
3 Achọrọ SmartGaGa
4 Etu esi ebudata SmartGaGa
5 Na nkenke: Chezọ SmartGaGa
Kedu ihe bụ SmartGaGa
SmartGaGa bụ onye nomi maka ndị ọrụ chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu gam akporo na / ma ọ bụ ngwa na PC nwere obere akụ, yabụ na ọ dị mma maka ndị ahụ niile na -enweghị ike ị nweta kọmpụta siri ike mana chọrọ nwee ụdị egwuregwu ịgba egbe dị ka ndị ọrụ PC.
Ngwa a, dị ka ezigbo emulator kwesịrị nnu ya, na -enye anyị ohere igbanwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụkpụrụ ọrụ na mgbakwunye na ikwe ka ndị ọrụ hazie ọrụ nke igodo dị ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ịchọghị iji ahụigodo na òké, ị nwere ike hazie ihe njikwa ihe njikwa Sony gị ma ọ bụ Microsoft ma ọ bụ jiri onye njikwa Windows dakọtara ọnụ ọnụ.
SmartGaGa ọ dị nchebe? Ee na mba
Nsogbu mbụ anyị na -ahụ na emulator a bụ mgbe nbudata ya. Webụsaịtị gọọmentị kwụsịrị ịrụ ọrụ ọnwa ole na ole gara aga na ugbu a, anyị nwere ike ibudata ya site na ọtụtụ ebe nchekwa ngwa, nke anaghị ekwe nkwa na ngwa ahụ enweghị nje, malware, spyware na ndị ọzọ.
Ozugbo anyị ebudatara ngwa ahụ, sistemụ ga -enyocha ya. Ọ bụrụ na enweghị nje ọ bụla, anyị ga -enwe ike ịwụnye ya na enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na n'oge nrụnye ma ọ bụ mgbe ịmalitere emulator na nke mbụ, antivirus na -achọpụta ihe dị ịtụnanya, ga -egbochi ọrụ nke ngwa ahụ.
Na YouTube anyị nwere ike ịchọta ọnụọgụ vidiyo emelitere ebe egosipụtara emulator na arụ ọrụ zuru oke, yabụ na mbụ obi abụọ gbasara nchekwa gị na -apụ n'anya.
Otú ọ dị, anaghị eme ka anyị tụkwasị obi na nchekwa nke anyị otu na ngwa amabeghị nke ọma, ebe ọ bụ na isi mmalite dị iche iche na -ekwu na n'azụ SmartGaGa bụ Tencent nakwa na ọ bụ otu emulator dị ka GameLoop, onye ọzọ kacha ewu ewu iji nwee egwuregwu Android na PC, yana obere ego.
N'eziokwu, ihe kacha nta achọrọ maka GameLoop Ha bụ otu ihe na SmartGaGa mara ọkwa n'oge ahụ, yabụ anyị nwere ike ịsị na Tencent gbanwere aha SmartGaGa ka ọ bụrụ GameLoop, mana ọ dị nwute na onweghị ozi na -akwado mgbanwe a ma ọ bụ na Tencent bụ n'ezie n'azụ emulator a.
Ihe ngosi SmartGaGa chọrọ opekata mpe Windows 7 gaa n'ihu (ọ dị mwute ikwu na ọ naghị arụ ọrụ na Windows XP ma ọ bụ Vista). Nhazi ahụ ga -enwerịrị opekempe 2 cores (Intel Core 2 Duo gaa n'ihu), Nchekwa 2 GB Ram na ụdị eserese ọ bụla, gụnyere nke ala nke na -ejikọ motherboard nke otu anyị.
Mana, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ n'ọnọdụ kacha mma wee nweta ihe kachasị na egwuregwu, Windows 10 dị mkpa, onye nrụpụta Intel Core i5 gaa n'ihu, 8 GB nke Ram na o doro anya, kaadị eserese nke raara onwe ya nye na -amalite na 1 GB nke VRAM.
Obere oghere achọrọ na diski ike bụ 200 MB, oghere na -abawanye ka anyị na -ebudata ma wụnye egwuregwu ọhụrụ, yabụ na ọ dị mkpa ịnwe ọtụtụ GB nke ohere efu na draịvụ ike anyị ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka kọmputa anyị malite ibelata.
Etu esi ebudata SmartGaGa
Iji budata ụdị SmartGaGa kachasị ọhụrụ anyị nwere ike ime ya site n'elu ikpo okwu ịnyịnya faịlụ. Ikpo okwu a na -akwado nke ahụ jiri ngwa antivirus 64 wee nyochaa ngwa ahụ ịlele na ọ nweghị nsogbu ọ bụla.
Ọzọkwa, ọ na -ekwukwa na faịlụ ahụ dị na nchịkọta mbụ ya yana na agbanwebeghị ka ịgbakwunye ntinye nke ngwa ndị ọzọ (ọ bụ ezie na faịlụ mbụ enyela anyị ohere ịgbakwunye ngwa ndị ọzọ dịka antivirus, vpn na ndị ọzọ), yabụ ịwụnye ngwa agaghị apụta ịgbakwunye ngwa na -abaghị uru na otu anyị karịa nke onye nrụpụta gụnyere.
Iji nwalee tupu m dee edemede a, ebudatarala m ngwa ahụ na mgbe ị na -etinye ya, Windows Defender agwala m nke ahụ a na-ahụ ihe iyi egwu dị ala na ngwaAgbanyeghị, usoro iji wụnye ngwa enweela ike ịga n'ihu na -enweghị nsogbu ma ejisiri m wụnye ya na kọmputa m.
N'otu weebụsaịtị ahụ, ụmụ okorobịa si filehorse kpọọ anyị ka anyị gaa na webụsaịtị onye nrụpụta, n'agbanyeghị, dịka m kwuru n'elu, nke a anaghị arụ ọrụ, yabụ ụdị dị, ọnụọgụ 1.1.646.1 bụ nke kachasị ọhụrụ site na ikpo okwu a na nke ikpeazụ onye nrụpụta wepụtara.
N'ịbụ ụdị kachasị ọhụrụ dị, na -eburu n'uche na webụsaịtị ahụ adịghịzi, belụsọ na ọ bụ ndụdụ nke GameLoop, o yighị ka anyị ga -enwe ike ịchọta ụdị ọhụrụ dị n'ọdịniihuYa mere, m ga -atụ aro ka ị jiri GameLoop, nke ihe chọrọ ya na SmartGaGa bụ otu.
Na nkenke: Chezọ SmartGaGa
Onwe ya Agaghị m etinye ngwa a na kọmputa m. Ọbụghị naanị maka ihe iyi egwu nke Windows Defender achọpụtala, ebe ọ na -etinye ada n'azụ ntị, n'agbanyeghị na ọ na -enye anyị ohere ịga n'ihu na nrụnye na -egbochi ya. Mana n'ihi na ibe weebụ n'azụ emulator a adịkwaghị.
Ebe ibe weebụ adịghị, ọ pụtara na ngwa ahụ agaghị eweghachite mmelite ọhụrụ, yabụ ọ bụrụ na egwuregwu anaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ ngwa nwere ahụhụ, a gaghị edozikwa ha site na mmelite.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye emulator maka kọmputa dị ala, nhọrọ kacha mma ịtụfu ngwa a bụ Egwuregwu, emulator na -arụ ọrụ na obere akụrụngwa, Tencent nọ n'azụ, a na -emelite ya oge niile yana mgbe etinyere Windows Defender anaghị agwa anyị ihe iyi egwu ọ bụla.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'isiokwu a egosighi m gị otu ngwa a si arụ ọrụ, naanị n'ihi na Enwebeghị m ike ịwụnye egwuregwu ọ bụla dị na Storelọ Ahịa Play ọbụghị njikọ kpọmkwem na egwuregwu atọ achọtara na ihuenyo mbụ. Ikwenye, ọzọkwa, na ngwa anaghị arụ ọrụ, anaghị emelite ya yana na ọ bụ igbu oge ịwụnye ya na kọmputa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbu oge dị ka m mere, ị nwere ike ime ya, mana enwere m ike ijide gị 99% na enweghị ụjọ na ị ga -emejọ, na ị ga -ahụ otu nsogbu m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » SmartGaGa Nke a emulator gam akporo adịghị mma?
Kedu ka m ga -esi mara ma m nwere SIM abụọ
Etu ị ga -esi mara ma ọ bụrụ na mmadụ eleghara ozi gị anya na Facebook Messenger